Goolhaye Thibaut Courtois oo shaaca ka qaaday sababta ka dambeysa dhibaatada ay ku dhex jirto kooxdiisa Blues. - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Goolhaye Thibaut Courtois oo shaaca ka qaaday sababta ka dambeysa dhibaatada ay ku dhex jirto kooxdiisa Blues.
Goolhayaha kooxda Chelsea Thibaut Courtois ayaa shaaca ka qaaday dhibaatada heysata kooxdiisa Blues kadib markii ay dhaafi waayeen 10-xidig oo Leicester City ah kuwaas oo soo booqday garoonka Stamford Bridge.
Kooxda difaacaneysa horyaalka Premier League waxey ku guuldareysteen iney tartan xoog leh u galaan sidii ay sanad labaad oo xiriir ah u hanan lahaayeen, balse haatan 15-dhibcood ayey ka dambeeyaan Citizens oo berito la ciyaareysa Liverpool.
Kadib kulankii gool la’aanta ku dhamaaday ee ka dhacay galbeedka London, xidiga reer Belgium wuxuu la hadlay warbaahinta wuxuuna sheegay iney daalan yahiin.
“Sida cad waxaan dooneynay inaan kulanka badino, dhamaadkii 10-xidig oo Foxes ah ayaan saarnay cadaadis, balse 70-daqiiqo waxey ahaayeen kuwa naga fiican”
“Sida cad waxaan dareemeynaa daal yar, sanadkii hore waxaan heysanay isbuuc ilaa isbuuc, balse haatan durba waxaan ciyaaarnay kulamo badan, balse taasi maahan marmarsiyo, Leicester wey naga xooganaayeen, sidoo kalana wey naga kalsooni badnaayeen – waxey ku bilowdeen hab difaac waxeyna isku dayeen iney kulanka guuleystaan”